Maoritania: Kapoka Mandrivorivo Nataon’ny Mpianatra Tamin’ny Prezidansa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Mey 2012 12:29 GMT
Nanao fanambarana tsy nampoizina [ar] nandritra ny valan-dresaka nomanin'izy ireo sady nampitain'ny televizionam-panjakana Maoritaniana tamin'ny 3 Mey teo ny vondrona mpianatra Maoritaniana iray. Nambaran-dry zareo ary fa nanandrana nanolikoly azy ireo hampitsaharana ny tolony hitaky ny zon'ny mpianatra sy hampitsahatra ny hetsi-panoherana sy ny sit-ins isan-karazany ny chief of staff Isselkou Ould Izidbih [filohan'ny Anjerimanontolon'i Nouakchott teo aloha].
Nambaran'ny mpitondra tenin'ny vondrona fa niangavy azy ireo hisintaka amin'ny sendikà nasionalin'ny mpianatra Maoritaniana ho takalon'ny fanomezana vola 500 000 ouguiya [eo ho eo amin'ny $1700] sy vatsim-pianarana any amin'ny firenena izay tiany ny chief of staff-n'ny filoha.
Nambaran'ny vondrona fa rehefa nihaona im-betsaka tamin'Izidbih tao amin'ny Lapam-panjakana ry zareo dia nampinoany fa hisintaka ka hanambara izany amin'ny valan-dresaka. Nokarakarain-dry zareo avokoa ny zava-drehetra, tahaka ny fifanarahana amin'ny fampitam-baovao sy ny famandrihana ny efitra lehibe ao amin'ny efitra fandraisam-bahiny manelatrelatra Al Khaima Hotel.
Saingy felaka mandrivorivo no nomen-dry zalahy rehefa naseho vahoaka ny “firaisana tsikombakomba’ ary naseho tamin'ny haino aman-jery ny porofon'ny fitsabahany mivantana ao amin'ny anjerimanontolo sy ny hanakorontana ao. Nampangain'ny mpianatra ho mandrisika fankahalana vahiny ao amin'ny anjerimanontolo amin'ny alalan'ny fanakaramana sy fandrisihana ny mpianatra ihany koa ny chief of staff-n'ny filoha.
Asehon'ity lahatsary [ar] manaraka ity ny sombin'ny valan-dresaka:
Niala tao amin'ny valan-dresaka ny televizionam-panjakana maoritaniana taorian'ny fanambarana ; tsara ny manamarika fa sambany no mba tonga tamin'ny zavatra tahaka itony izy io.
Ny bilaogera Dada Ould Sheikh Ibrahim moa nanoratra momba ny raharaha:
Tao ho ao aho no nandre momba ny fitokonana, hetsi-panoherana ary fisamborana ao amin'ny anjerimanontolo tokana maoritaniana, ny Oniversiten'i Nouakchott, mbamin'ny fandroahana mpianatra maro, sy ny fampijaliana ny sasany ary ny fandrarana azy ireo tsy hahazo hivavaka mandritra ny fitazonana azy ireo. Saingy tsy azoko tsara izay tena mitranga any ambadiky ny sehatry ny anjerimanontolo – ilay hany tokana nialako ka nidirako ny tontolon'ny tsy fananan'asa tamin'ny 2007, tahaka ny tanora Maoritaniana an'arivony hafa.
Saingy azoko ihany ny fandehany androany. Misy mpianatra sasany manomana valan-dresaka ao amin'ny Al Khaima Hotel, hilaza ny fisintahan-dry zareo avy ao amin'ny Sendikà Nasionalin'ny Mpianatra Maoritaniana. Natrehin'ny mpitandro ny filaminana manao fanamiana sivily maro sy mpitsikilon'ny fitondrana ny valan-dresaka. Vao nanomboka ny raharaha, notampohin'i Almeen Ould Hamadi, mpikambana ao amin'ny birao mpanatanteraky ny Sendikà Nasionalin'ny Mpianatra Maoritaniana ny rehetra. Nambarany fa nanolotra asa sy vola ho azy i Isselkou Ould Izidbih, chief of staff-n'ny filoha sady filohan'ny Oniversiten'i Nouakchott teo aloha, hisintaka ao amin'ny sendikà, ary eo ambany fanaraha-mason'ny mpikambana ao amin'ny sendikà teo aloha koa izany, Atoa Itwal Omar.
Namoaka fanambarana momba ity raharaha ity ny vondron'ireo iharan'ny kolikoly:
Gaga sy tohina izahay ato amin'ny Iharan'ny Kolikoly tamin'izay renay tamin'ny takarivan'ny 3 May 2012 tao amin'ny Al Khaima Hotel, nandritra ny valan-dresaka nifanaovan'ny mpitarika ny mpianatra izay lazaina fa hisintaka amin'ny sendikà nasionalin'ny Mpianatra maoritaniana, sy ny hoe fananganana ny Sendikà Nasionalin'ny Mpianatra Maoritaniana Afaka.
Ampitainay izao vaovao manaitra tao amin'ny valan-dresaka izao, miampy porofo matanjaka izay tsy notsipahan'ireo voarohirohy, entinay manao izao fanambarana izao:
1. Taitra tokoa izahay nahare fa navadika ho departemanta fanomezana kolikoly ho an'ny mpianatra sasany ny ao amin'ny sampan-draharahan'ny filoha, amin'ny fanambazana vatsim-pianarana sy asa miandry, ao anatin'ny fikendrena hahazo tombontsoa vonjimaika anaty lalantery.
2. Malahelo ihany koa izahay mahare fa lasa mpanao kolikoly ilay sampandraharahan'ny filoha, mitondra ny fanevan'ny ady amin'ny kolikoly sady mampiely ny olana fa tsy miezaka ny mamongotra izany.
Nisioka ilay mpikatroka fantatra amin'ny maha-Mahmoum bi Mauritania azy:
Eo amin'i mekanika [anaram-bositry ny filoha] sy ny chief of staff-ny, mifintina ho lainga sy firaisana tsikombakomba mahatsiravina i Maoritania
Niresaka momba ity raharaha ity ihany koa i Nasser Al Hashemi:
Nosoniavina tao amin'ny biraon'ny filoha ny fifanarahana. Malahelo tokoa aho amin'ny anaovana ny prezidansa. Ny halehiben'ny firenena; mariky ny fifanarahana misintaka amin'ny rafitry ny repoblikantsika.